Doka am-boalohany: manao ahoana izy ireo ary ohatra | Famoronana an-tserasera
Alao sary an-tsaina hoe mijery sarimihetsika na andian-dahatsoratra amin'ny fahitalavitra ianao, ary tampoka dia mandeha any amin'ny dokambarotra izy ireo, fa tsy manova ny fantsona no jerenao. Na maheno azy ireo. Na izany aza, tsy mahasarika azy ireo ianao ary tsy ela dia mifantoka amin'ny zavatra hafa. Leo amin'ny dokam-barotra ve ianao? Ahoana raha misy fehezan-teny tampoka, feo iray, izay mahatonga anao hahatsikaritra ny zava-mitranga amin'ny fahitalavitra ary tampoka dia tsy afaka mijanona tsy mieritreritra izay hitanao ianao? Ahoana raha manova ny scenario ho an'ny Internet isika ary mitovy ny zava-mitranga? ny Ny dokam-barotra tany am-boalohany dia nanjary tsy dia fahita firy satria, hoy ny fitenenana, "vita daholo izany."
Saingy misy hatrany ny famoronana izay mahay 'mamoritra ny curl', mamorona sangan'asa misarika ny saina ary izay no faritana ho ny tsara indrindra vita. Ka anio dia te-hanome anao hevitra vitsivitsy momba ireo dokam-barotra tany am-boalohany izahay mba hahafantaranao ny fototr'izany ary ny antony tsy tokony hanaovanao ny ataon'ny hafa, na dia ianao irery aza no manao azy. Momba ny fanovana.
1 Maninona no miloka amin'ny doka voalohany
2 Doka am-boalohany 10 tsy azonao adino
2.1 Varotra am-boalohany: Spice taloha
2.2 Varotra am-boalohany: Kitkat
2.4 Varotra am-boalohany: WWF
2.5 Andriamatoa Madio
2.6 Varotra am-boalohany: Nike
2.8 Varotra am-boalohany: H&S
2.10 Varotra am-boalohany: Pepsi
Maninona no miloka amin'ny doka voalohany
Ireo mailer tany am-boalohany dia tsy mora atao. mitaky ora sy ora fisainana, famoronana, tsy fahombiazana ary lesoka ary fahadisoam-panantenana. Tsy hanafina izany izahay. Ny zava-manan'aina miasa amin'ny doka dia mahafantatra ny fahasarotana lalovany mba hisamborana olona ao anatin'ny 20-30 segondra monja; indraindray aza kely kokoa.
Fa rehefa manao izany ianao dia fahombiazana mihoapampana. Bebe kokoa raha miresaka ny zava-misy isika fa izao dokam-barotra tany am-boalohany rehetra izao dia mety hiafara amin'ny famoahana viral, tsy amin'ny alàlan'ny vava fotsiny, fa amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy ihany koa.
Mba hanomezana ohatra anao. Coca Cola. Raha izany dia marika tsara izy io, fa doka inona no tadidinao momba izany? Azonao atao ny manondro ny iray amin'ireo "ora Coca-Cola" izay fahombiazana lehibe ary nampifandraisin'ny rehetra tamin'ny 11.30 ora sy sasany ny "ora Coca-Cola" maraina satria io no fotoana napetraka tao amin'ny doka ary satria ianao nahalala fa tamin'izany fotoana izany dia misy zavatra manan-danja.
Na koa ilay doka izay nilaza fa Coca-Cola dia natao ho an'ny rehetra ary nanondro hoe: "Ho an'ny olona matavy. Ho an'ny mahia. Ho an'ireo avo. Ho an'ny basika. Ho an'ireo mihomehy. Ho an'ireo optimista. Ho an'ireo pessimist… ”.
Ireo mpandefa mailaka dia manana lanjany lehibe amin'ny marika noho ny tombony azony amin'ireny. Ohatra:
Izy ireo dia manome ny olona rehetra fahafaham-po amin'izany doka izany. Satria manome zavatra ampahibemaso ho an'ny besinimaro izy ireo ary manery ny fahaiza-mamorona raha oharina amin'ny fanehoana zavatra mitovy hatrany.
Nahazo fahitana bebe kokoa ianao. Amin'ny heviny fa hozaraina mihoatra ny segondra vitsy amin'ny fahitalavitra, Internet, radio ... Ireo tambajotra koa dia mahatonga ny votoaty ho lasa viraliny bebe kokoa.
Miresaka momba ny doka ny rehetra. Ataonao lohahevitra ifanakalozan-kevitra izy io, miaraka amin'izay, dia hanao doka ho an'ny marika ianao. Ary betsaka ny olona maniry hahita ny doka.
10 dokam-barotra tany am-boalohany izay tsy azonao adino
Araka ny fantatsika fa ny tsara indrindra ho an'ny hazavao ny dokam-barotra tany am-boalohany dia mahita ohatra amin'izany ianao, eto izahay dia nanangona santionany iray amin'ireo maro azontsika hitarina (na dia ampitahaina amin'ny dokam-barotra rehetra eto an-tany aza dia ampahany kely ihany).
Varotra am-boalohany: Spice taloha
Old Spice dia iray amin'ireo marika nahazo laza malaza be indray, indrindra fa taona vitsy lasa izay, rehefa nandefa doka izay tena nanaitra ny besinimaro izy ireo. Ary tsy afaka milaza izahay fa nanaja ny doka ho orizinaly izy ireo, fa tsy fahita firy. Fa iray amin'ireo tsy fahita firy izay tsy mampaninona anao ny mahita.
Amin'ity tranga ity, ilay "fofona toa an'i dadatoa, dadatoa" no nanaitra ny rehetra.
Varotra am-boalohany: Kitkat
Rehefa maheno KitKat ianao, ny zavatra mahazatra indrindra dia ny mieritreritra ny hanome fialan-tsasatra ho an'ny tenanao. Ary iray amin'ireo faritra hisy olona marobe fitsaharana amin'ny fiainanao be atao dia ireo dabilio zaridaina. Betsaka no mipetraka any miala sasatra, mizara fotoana mangina, ary eny, maka aina.
Ka nanapa-kevitra ireo mpamorona fa ny iray amin'ireo dokambarotra tsara indrindra tany am-boalohany dia ny mampifandray an'i KitKat amin'io dabilio io, ary novainy ho takelaka KitKat izy io. Fahombiazana tanteraka.
Ity doka misy fahitana mihoatra ny 92 tapitrisa ity dia azo isaina amin'ny iray amin'ireo doka voalohany tsara indrindra. Ary ho hitanao ao ny mpilalao sarimihetsika Jean-Claude Van Damme.
Fa raha ny marina Tsy noho ilay mpilalao sarimihetsika tenany akory, fa noho ny zavatra ataony dia miparitaka tanteraka ny tongotra, mipetaka amin'ny fitaratra fijerin'ny kamio roa, izay atosika mifamadika sy misaraka tsikelikely mba hampisehoana sary mamela anao ho vava. Ara-bakiteny.
Varotra am-boalohany: WWF
WWF no ONG mikarakara ny tontolo iainana sy ny biby. Ary saika marina foana ny doka azon'izy ireo. Saingy tsy isalasalana fa ny iray tamin'ireo tena nisy fiatraikany dia ity, ny "havokavoky ny Tany." Ary io dia, ao aminy dia misy havokavoka roa vita amin'ny hazo, ary ny fomba nanimban'izy ireo ny iray tamin'izy ireo.
Raha raisintsika izany ny hazo no ahafahantsika manana oxygen mifoka rivotra sy miaina, endrika iray amin'ny zava-misy henjana ataon'ny tanan'olombelona io.
Andriamatoa Clean dia iray amin'ireo mpanadio fanta-daza indrindra, ary nilaza izy fa navelany ho madio tanteraka ny zava-drehetra. Mazava ho azy fa ity sary izay hiarahan'ny mpivady miampita zebra ity dia mahasarika ny saina satria ny iray amin'ireo tsipika ireo dia fotsy noho ny mahazatra. Raha ny mahazatra dia Andriamatoa Madio izy io.
Varotra am-boalohany: Nike
Izany no iray amin'ireo dokam-barotra tany am-boalohany lava indrindra tamin'ny tantara, satria maharitra 4 minitra mahery. Na eo aza izany, na eo aza ny fanolorana zavatra lava be, ary atahorana hanorisory, ny marina dia ny zava-bitan'izy ireo. Manana mihoatra ny 97 tapitrisa reproductions sy ny sendikan'ny mpilalao baolina kitra miaraka amin'ny tsy ampoizina hafa.
Ary marika fanatanjahan-tena iray hafa nahay nanamboatra zavatra malaza izay mahazatra an'ny kiraro rehetra: ilay boaty itahirizanao ny kiraro.
Varotra am-boalohany: H&S
Ity marika shampoo ity dia nanome ny iray amin'ireo doka mahatsikaiky indrindra hatramin'izay. Ao aminy, liona miaraka amin'ny volony sy ny volany. Amin'ity sary manaraka ity, ilay liona iray ihany, noho ny shampooing manalefaka, dia niseho niaraka tamin'ny a volo malama sy voakambana tsara.
Ity sarin'i Ford ity dia iray amin'ireo nankasitrahana indrindra rehefa nivoaka. Ary io dia, miaraka amin'ity sary ity, dia efa nanondro zavatra betsaka. Raha tsikaritrareo dia lakilen'ny Ford ihany no mivoaka, miaraka a silhouette izay toa trano. Ary ilay andianteny: Eo am-pelatananao ny tanàna. Mba hanondroana fa miaraka amin'ny fiara ianao dia afaka mandeha amin'ny toerana rehetra.
Varotra am-boalohany: Pepsi
Ity doka Pepsi ity dia iray amin'ireo tsaroana indrindra sy tany am-boalohany, tsy dia noho ny zava-mitranga akory, fa noho ny mozika mitendry sy ilay hira mihitsy. Raha ny tena izy, Pepsi dia nandeha lavitra tamin'ity doka ity noho ny marika hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Doka am-boalohany